Mogadishu Journal » Ingiriiska oo AMISOM ugu deeqday qalab culus oo ku kacaya £5.6 milyan
Mjournal :-Dowladda Ingiriiksa ayaa qalab ay qiimahooda gaaraysa 5.6 milyan oo baund ugu deeqday Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) si ay gacan uga geystaan nadiifinta waddooyinka muhiimka ah xilli ay ciidamadu sii xoojinayaan hannaanka kala-guurka ah ee ku saleysan shuruudo.
Qalabkan oo ay ka mid yihiin gaadiidka cafta nooca xamuulka, cagaf-cagafta, nooca cagafta afka gadaal ku leh iyo kuwa horey ku leh, gawaarida alaabta baabur kale loogu wareejiyo, gaadiidka xamuulka, iyo kuwa kale ayaa waxaa laga adeegsan doonaa Qaybta Koowaad, Labaad iyo Shanaad iyo Qaybta Xoojinta Hawlgalka ee saldhiggeedu tahay Muqdisho.
Safiirka Boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya, David Concar, ayaa markii uu qalabka wareejinayay maalintii Sabtida waxaa uu sheegay in dowladdiisa ay ku faraxsan tahay in ay AMISOM kala shaqeyso dadaalladeeda ay ku dooneyso in ay xasiliso Soomaaliya, ayna nabad iyo amni waara ka dhaliso dalka.
Mudane Concar ayaa uga mahadnaqay ciidamada nabad-ilaalinta iyo waddamada ciidamada deeqay dadaalka ay geliyeen in ay xaqiijiyaan in ay Soomaaliya hesho xasillooni.
Markii laga soo gudbo qaybta koowaad, 12 makiinado ayaa loogu deeqi doonaa Qaybta 2, Qaybta shanaand (12) iyo Qaybta Xoojinta Halwgalka (11).